ထူးမယ့်ထူးတော့ အဲသည်လိုထူးသတဲ့လား (၁၂.၁၂.၁၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးမယ့်ထူးတော့ အဲသည်လိုထူးသတဲ့လား (၁၂.၁၂.၁၂)
ထူးမယ့်ထူးတော့ အဲသည်လိုထူးသတဲ့လား (၁၂.၁၂.၁၂)
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Dec 12, 2012 in Creative Writing, Members | 41 comments
၁၂.၁၂.၂၀၁၂ တနည်းအားဖြင့် ၀မ်းတူးဝမ်းတူးဝမ်းတူး…
မနက်ကတည်းက ထူးခြားသတင်းကိုတမျှော်မျှော်နဲ့ နေ့လည် တစ်နာရီထိုးလေသည်…။
အချိန်လဲ လွန်ပြီ၊ နေ့လည်စာလဲ စားပြီးပြီ ၊ သုံးလိပ်မြောက်စီးကရက်လဲသောက်ပြီးပြီ…
ကမ္ဘာလဲမပျက်၊ ငလျှင်လဲမလှုပ်၊ သွေးလဲမတိုး ၊ ခေါင်းလဲမကိုက်
ဖုံးမည်သံကြားလို့ ကောက်ကြည့်လိုက်တော့ ရဲဘော်ရဲဘက်မိတ်ဆွေကြီး…
ထူးခြားတဲ့နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ဖုံးဆက်လေသည်မို့ ၀မ်းသာအားရကောက်အကိုင်…..
ညီငယ်လို ခင်မင်သူတယောက် ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်သည့်သတင်း….
ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ဘ၀ခရီးကိုလျှောက်လှမ်းနေသူကလေး…
မျက်စိထဲ ပြာကနဲဖြစ်သွားပြီး လက်ဆွဲအိတ်ကလေးကောက်ဆွဲကာ ဆေးရုံလိုက်ရတော့သည်..။
တိုက်တဲ့သူရောမိရဲ့လား၊ မိလျှင်တော့ ဆေးဝါးကုသဖို့ တာဝန်ယူမှာထင်ပါတယ်…
ကိုယ်က အကောင်းတိုင်းတော့အလွယ်တကူ ပြန်ဖြစ်မည်မထင်…
နစ်နာကြေးလေး လျော်ကြေးလေးရအောင် တောင်းရမှာပဲ…
ဆေးရုံရောက်သွားလို့ ပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့တွေ့ရတော့ မျက်ရည်ဝိုင်းမိသည်
ဒီတော့ ဘယ်သူမှ မလျော် ၊ ဘယ်သူမှမကု..
(လက်လှမ်းမီရာမိတ်ဆွေတချို့ကတော့ ကူညီနိုင်သွားပါသည်။ ၄င်းမိတ်ဆွေများကို သူငယ်လေးကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်မိပါသည်)
လက်နဲ့လုပ်စားပါတယ်ဆိုမှ လက်နှစ်ချောင်းကျိုးသွားတဲ့ သူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီး
အခြား အခြား ကိစ္စများမှာရောပေါ့လေ….
ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် ရှောင်လွှဲနိုင်တယ် မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူး ဆိုတာတွေကတော့
အဲဒါတွေက ပြောစရာ ငြင်းစရာ ထောက်ခံစရာ ကန့်ကွက်စရာတွေပေါ့
တနည်းအားဖြင့် လေပေါ စရာတွေပေါ့
အဲဒါတွေအပြင် အခြား အဖြစ်မှန်တခုကတော့ရှိလေသည်။
အဲဒါက ပိုပြီး လက်တွေ့ကျပါသည်…။
ရွာထဲက သမီးလေး ချာတူးလန်ရဲ့ စကားလေးကို ကိုးကားညွှန်းဆိုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ….
PS.. ကာယကံရှင်၏ဆန္ဒအရ ကာယကံရှင်၏အမည်ကို မဖေါ်ပြနိုင်သေးပါကြောင်း…..။
စပ်စုတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ…….
ုတမီးလေး ချာတူးလန် ရဲ့စကားလေးက အမိုက်စားလေးပါလား ..
၁၂-၁၂-၁၂ မှာဒီထက်ထူးခြားတဲ့ သတင်းလေးများ ရှိမလားလို့ မျက်စိ ဒေါက်ထောက်ပြီး
ရွာထဲမှာ ထိုင်၍စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း . . (ကောင်းသော သတင်းဖြစ်ဖို့လဲ မျှော်လင့်မိပါ၏)
အက်စီးဒန့် ဖြစ်သွားတာလား ဘာလားမသိတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့
စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါကြောင်း . . . . . . .
ရွာထဲက ဘယ်ရွာသားလဲဗျာ.. ဦးလေးပါ။…
အသက်မထိခိုက်တာ တော်ပေသေးတယ် လို့ ဖြေလိုက်ကြစို့လား။
လူအသက်ရှင်နေသ၍ ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးပါ။
အာလျော့မသွားစေလိုပါဘူး လို့ အားပေးပေးပါ ကိုပါ ရှင့်။
အဲဒီလိုကြီးနာမည်မပြောတော့ ဟိုလူလားဒီလူလားလို့ တွေးပြီး ပိုပူနေရမလားလို့။
ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး သူ့ကို ထိရောက်တဲ့ အကူအညီပေးနိုင်မယ့်သူတွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ။
ဥပမာ ဆေးရုံပေါ်က ဂဇက်ရွာသူားဆရာဝန်တွေ။
ကဲ အက်ဆီးဒင့် မဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း ဒီမှာ နေကောင်းကြောင်းသတင်းပို့သွားကြနော။
သူငယ်လေးလည်း မြန်မြန်နေကောင်း ကျန်းမာပကတိရှိပါစေ။
” ကဲ အက်ဆီးဒင့် မဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း
ဒီမှာ နေကောင်းကြောင်းသတင်းပို့သွားကြနော ”
မ padonmar ။
အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တာ အဘ တော့ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ ။
နောက်မိတာ စိတ်မဆိုးကြပါနှင့်နော် ။
အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
အဘ လည်း ရန်ကုန် ပြန်လာတော့မှာမို့ ။
ရန်ကုန် ပြန်ရောက်မှပဲ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားတွေ့ပါ့မယ် ။
ကိုယ့်ရွာသူားချင်းချင်း ခင်မင်တဲ့စိတ်နဲ့ 
ကိုယ့်ရွာထဲကလူ မဟုတ်ပါစေနဲ့ လို့ 
ွှအဲသလို မထူးစေချင်ပါဘူး ဦးပါရယ်။
မြင်ရတာ ပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့လို့ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
စာဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တောင်လည်သွားတယ် ဦးပါ ကာယကံရှင်လည်း မြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေ
အားလုံးကို စိတ်ပူစေမိတာ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျို့ …
တကယ်တော့ ကျုပ်ရင်ထဲ မကောင်းလွန်းလို့
မနေနိုင်တာနဲ့ (တကယ့်ကို မနေနိုင်တာ ၊ အောင့်နေကြည့်သေးတယ်)
စည်းဖေါက်စည်းကျော်ပြီး ဒီပိုစ့်လေးကို တင်တာပါ..။
ကာယကံရှင်က လောလောဆယ် လူတွေ ဧည့်သည်တွေကို မတွေ့ချင်လို့
ရွာထဲမှာလဲ မပြောစေချင်လို့ (ဒါတော့ဘယ်ရမလဲ ၊ ကောင်းသွားမှလာသတ်ချင်သတ်၊ အချိန်တန်ရင်တော့ပြောမှာ..)
လောလောဆယ်လဲ သူ့မိတ်ဆွေတွေသူ့ကို သွားမတွေ့သင့်သေးပါဘူး…
ရွာသား … ဟုတ်ပါတယ်..
ဧည့်သည်တွေ့ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အခါ အသိပေးပါမယ်…
အကူအညီလိုရင် ဘယ်သူဘယ်လောက်တားတား ကျုပ်ပြောပါမယ် … ဆိုတဲ့ အကြောင်း…
အက်စီးဒင့် ဖြစ်တာက တနင်္ဂနွေ နေ့ ညကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ…။
ကျွန်တော်တို့ သိရတာက မနေ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှ သိရတာပါ…။
ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဆန္ဒအရ ရွာထဲမှာ လုံးဝ ပြန်မပြောဖို့…
နားလည်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ လည်း မျှော်လင့်ပါကြောင်း…။
“လက်နဲ့လုပ်စားပါတယ်ဆိုမှ လက်နှစ်ချောင်းကျိုးသွားတဲ့ သူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီး”
ရွာသူားတို့အားလုံး ဘေးရန်ကြောင့်ကျကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
ဒီပို့စ်မှာ ကွန်မင့်ဝင်ရေးနေသ၍ ကောင်းနေသူတွေလို့မှတ်ရမှာပေါ့..
အမောင်လုလင်များလားကွယ် (မဟုတ်ရင် စိတ်မဆိုးနဲ့နော်)
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံး နေကောင်းပါစေလို့
သတိရ တဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါဗျို့  … စိတ်လဲ မဆိုးပါဘူးဗျာ ..ဒီလို ပဲ .. “ဂွေ” လေးကိုင် မှ ထမင်းနပ်မှန် တာမို့လား …….. အစစအရာရာ သတိထားနိုင်ပါမှ တန်ကာ ကျတာဗျို့  ……Light Truck ဆိုလုိ့ .. အဲကားမျိုးကလဲ .. ရှေ့ မှာ သံပြား တစ်ချပ် နဲ့ မှန် ရယ် ပဲ ရှိတဲ့အမျိုး ……. :-(
ရွာထဲမယ် ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းကြတဲ့သူတွေအတွက်လဲ
မည်သူ မည်ဝါ မှန်းမသိရပေမဲ့ အမြန်ဆုံး ကျမ်းမာရေး ကောင်းမွန်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..
ဖက်တီးကက်၊ သူရဇော်၊ အမတ်မင်း၊ အာဂ၊ နွယ်ပင်၊ ချာတူးလန်၊ ရွှေတိုက်စိုး၊ Mလုလင်၊ ရွှေအိ၊ အိတုန်း၊ AKKO အားလုံး အကောင်းအတိုင်းရှိကြောင်းပါ….
စာရေးဆြာ အင်္ဂါနေ့အထိ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တယ်ဗျို့ …
ကျုပ်အစက သူလို့ ထင်ထားတာ .. ဘဘဘလက် ကွန်းမန့်ဖတ်မှ
အင်း … ကာယကံရှင်ကလည်း မသိစေချင်
ငါဟုတ်ဖူး သူဟုတ်ဖူးနဲ့ ၀ိုင်း ကလိမ်း လုပ်ကြရင်းနဲ့ ..
ဘယ်သူတုန်း မှန်းလို့ရနေပါပြီဗျာ …
ဟုတ်ကဲ့ ကို ဇမ္ဗူ့လောကပါလကြောင်ဝတုတ် ရေးပြတဲ့သူတွေကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူကိုမှန်းကာ စိတ်ပူလိုက် တော့မယ်။ ကျန်းမာပကတိ အမြန်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဟိုကောင်မ ပုလင်းလေးရမ်းတမ်းရမ်းတမ်းနဲ့သူ များလား
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးချင်ပါတယ်။
ကျနော်ကလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြီး
ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ လာစေဖို့ အကြောင်း
စိတ်ထဲတော့ တကယ်ပဲ မကောင်းဘူးဗျာ …
ခုရော အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ မသိဘူး …
စိတ်မကောင်းပါဘူး ဆောင်းတွင်းကြီး ခလုတ်လေးတိုက်မိရင်တောင် တော်တော်နာတာ… :buu:
အဲ့ဒါတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ တော်တော်ကြီးအရေးတကြီးလိုနေကြောင်း
ဦးမာဃလဲ အမြန်ပြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သ နေပါကြောင်းးးးးးးးးးး
လက်ကြိုးသွားတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအတွက်.. ဒီစာကို လက်နဲ.မရေးပဲ… ရင်နင့်စွာရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ..
ဘယ်နှယ့်များကြောင့် ငါ့သူငယ်ချင်းကိုမှ ဖြစ်ရတယ်လို. ကံကြမ္မာရယ်…
အဲဒီ လက်နှစ်ဖက်က လူသတ်နေတဲ့ လက်လဲမဟုတ်..
သူတပါးစီးပွားရေ ထိခိုက်အောင် လုပ်နေတဲ့ လက်လဲမဟုတ်..
ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန် အားကိုးရာမဲ့ ရုန်းကန်တက်လှမ်းနေတဲ့ လူငယ်လေးရဲ. ရိုးသားကြိုးစားတဲ့ လက်ပါဗျာ…
စိတ်မကောင်းစွာ ပကတိပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…
( ဘယ်ကားတိုက်သွားသလဲပဲ တိုက်တဲ့သူရောမိရဲ့လား၊ မိလျှင်တော့ ဆေးဝါးကုသဖို့ တာဝန်ယူမှာထင်ပါတယ်
သူဆေးကုပေးတယ်ထား… ကိုယ်က အကောင်းတိုင်းတော့အလွယ်တကူ ပြန်ဖြစ်မည်မထင်…
နစ်နာကြေးလေး လျော်ကြေးလေးရအောင် တောင်းရမှာပဲ…စသည်.. စသည်ပေါ့လေ…
အဖြစ်ကိုကြားရတော့ ပိုလို့ရင်နာသည်…ဘယ်ကားမှတိုက်တာမဟုတ်.. ကိုယ်စီးတဲ့ကားက
အုတ်နံရံဝင်ဆောင့်ပြီးဖြစ်တာ…ဒီတော့ ဘယ်သူမှ မလျော် ၊ ဘယ်သူမှမကု..ကိုယ့်ဘာသာကုရပေမည် )
ဘဲ့နဲ့ဗျာ ကားဒဇီးလုံး လာတာကို သူဖယ်ပေးသင့်တာပေါ့
ဒီပိုစ့်ထဲက ရေးသမျှ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ဘကြီးပုကွန်မန့် အကောင်းဆုံးပဲ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အသိပေးလို လို့ မဟုတ်ပါဘူး……
အခြားတယောက်အပေါ် မထင်မှတ်နိုင်လောက်အောင် နစ်နာသွားစေတတ်တာမို့
ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ်ရောသူပါ သတိပြုနေထိုင်သွားလာကြစေလိုရင်းပါ……
ဒါပေမယ့် ဒီရွာသားတွေက အကြားအမြင်တ၀က်လောက်ရနေတော့
ထိခိုက်သွားတဲ့ ရွာသားလေးအကြောင်း ပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်…
အသက် အန္တရာယ် မစိုးရိမ်ရတာတော်သေးပါတယ်။ အဆိုးကြုံ လာရင် အဆိုးထဲက အကောင်း ကို ရှာကြံပြီးတွေးကြည့် မှ သက်သာရာရပါတယ်။
ဘယ်သူလဲမသိပေမယ့် ရွာသူားတွေအားလုံးကိုခင်မင်နေမိတာမို့ အမြန်ဆုံး နေကောင်း လာဖို့ ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးရုံလဲဦးပါ…. ၅-၆ ပဲလား
08/12/2012 ည 7:00 လောက်က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မူးပီးမောင်းလာတဲ့ ဆန်နီဆူပါဆလွန်းကားတစ်စီးက ဘီးတာယာတွေကွဲ အရှိန်ပျက်ပီး ပလက်ဖောင်းပေါ်လျှောက်နေတဲ့ လူ၎ယောက်ကိုတိုက်သွားတာ အိုက်ထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအရေးပေါ်ကိုရောက်တယ် နောက်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ညာခြေကျိုးပီး ဘယ်ခြေကျင်းဝတ်ကြေသွားတယ် … ကြေသွားတဲ့ခြေထောက်က မဖြတ်ရရုံတမယ်မို့……. အကောင်းတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူးကွယ်………..
အဲ့ဒီ ကောင်လေးက ကျနော့်ညီလေးပါ…..
ဝေယံထွန်း၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အဆောင် ၅ – ၆၊ VC.9
ဒီညနေတော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းချုပ်နဲ့ သတ်ပုံဂိုဏ်းချုပ် ဦးပါကို ခြိမ်းခြောက်မေးပြီး ဆေးရုံပေါ်လိုက်ပြခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျမ အိမ်သာဆေးတာရေးလို့ သူလည်း အမြဲအိမ်သာဆေးမယ်လို့ တဗျစ်ဗျစ်ပါပြတဲ့ကလေး၊လူကြီးတွေလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းတွေကို မောင်အံနဲ့ အတူ အလိုက်တသိ ကြိုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ကလေး၊တစ်ရွာလုံးရဲ့ အချစ်တော်လေး(ပို့စ်တိုင်းကို သူအားပေးနေကျ)ကို ကျမတို့ ဘယ်လို မသိခြင်ထောင်ထောင်နေနိုင်ပါ့မလဲ။
သူကကျုပ်တို့ကို စိမ်းစိမ်းကားကား မသိစေချင်ဘူးလေးဘာလေးနဲ့၊
အညိုအမဲမစွဲတဲ့ ဖက်က ဂျိုစောင်းကို ခေါက်ခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။
ထုံဆေးနဲ့ ခွဲစိတ်ပြီး ကျိုးသွားတဲ့ ညာလက် လက်မောင်းရိုးကို စတီးချောင်းထည့်ထားရပါတယ်။
ဘယ်လက်က လက်ဖ၀ါးရိုးလေးတွေကိုလည်း ကျောက်ပတ်တီးစည်းထားရပါတယ်။
အဲဒါတော့ အရည်ပျော်နေတဲ့ကျမ ဘယ်အရိုးကျိုးလဲ မပြောပြတတ်တော့ဘူး။
ကျောက်ပတ်တီး မဖြည်ခင်လည်း လက်ချောင်းလေးတွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေဖို့တော့ မှာခဲ့ပါတယ်။
သူအလွယ်တကူစားနိုင်ဖို့ ခေါက်ဆွဲဘူးလိုမျိုး အသင့်စားလေးတွေဝယ်သွားပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့အကြိုက် ဘီဘီလေးတော့ မပါဘူးပေါ့။
သူ့ရဲဇားလေး(သူ့အခေါ် လေဒီစိတ်ပုတ်)လေးကတော်ရှာပါတယ်။ထမင်းချက်ပို့ နေ့ဖက်လည်း အလုပ်ကခွင့်ယူပြီး လာစောင့်ပေးရှာပါတယ်။
သူစိတ်အဆာပြေဖတ်ဖို့ သူကြီးရဲ့ သတင်းစာကလည်း ဒီနေ့ပဲရတော့ သူ့လက်ထဲတစ်စောင်ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူကြီးက အားပေးတယ်လို့မှာတဲ့ အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အသက်အန္တရာယ်နဲ့ နောင် မသန်မစွမ်းဖြစ်မှာ မပူရ(ပြန်ကောင်းမှာသေချာ)ပေမယ့် အချိန်တော့ယူရပါမယ်။
အန်တီကတော့ ရွာထဲ ပြန်ပြောမှာပဲလို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဆေးရုံကြီး ၅-၆ ကုတင်နံပါတ် ၂၀ပါ။
သူငယ်ချင်းများ ကြုံကြိုက်ရင် သွားအားပေးနိုင်ပါပြီ။
ရွာထဲမှာ အခြားဆရာဝန်ဆရာမများရှိရင်လည်း ကူညီပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ချာတူးရဲ့ ညီလေးအကြောင်းကတော့ ညရောက်မှသိရလို့ မကြည့်ခဲ့နိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ်။
တစ်ဝဒ်ထဲဆိုတော့ အပြန်အလှန်အားပေးကြရတာပေါ့။ဂဇက်မိသားစုတွေ ရေစက်ကလည်းမြင်းကောင်ရေအတော်ကြီးပါ့။
ယနေ့ မနက် ဖုန်းသတင်း အရ …
ကား အက်ဆီးဒန့်ဖြစ်သော ရွာသားမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာဖြင့်
ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပေး၍ ဆင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း…
အိမ်တွင် အနားယူ၍ ပြင်ပလူနာအဖြစ် ဆက်ကုရမည်ဖြစ်ကြောင်း